I-Composite Hydraulic Press, iSmc Hydraulic Press, umzobo onzulu we-Zhengxi
Metal sheet ukolula
Ukubumba i-powder metallurgy
Ukwenziwa kwe-extrusion ebandayo
Ukwenziwa kwepani ezantsi kabini
Metal umnyango embossing
SINIKEZA EYONA MVELISO ZOMQANGATHO OWONAYO
I-Chengdu Zhengxi Hydraulic Equipment Manufacturing Co., Ltd, eyayisakuba yi-Sichuan Chemical Works Machinery Co., Ltd, yayiyi-subsidiary ye-Sichuan Chemical Works Group Ltd (SCWG) .Yasekwa ukubonelela ngoomatshini kwi-SCWG ngonyaka we-1956. Ngo-2009. , yathengiswa yabucala yaza yamkelwa igama elitsha elithi Zhengxi.Ukusukela ngoko, ibizibandakanya kuphando, uphuhliso, ukwenziwa kunye nokuthengiswa komatshini wokushicilela ngoxinzelelo lwehydraulic. Ukuza kuthi ga ngoku sele ingumvelisi ochwepheshile kunye nomthengisi wezixhobo zoxinzelelo lwamanzi.Ikhethekileyo ekuboneleleni ngesisombululo esilungiselelweyo kunye noomatshini bokushicilela behydraulic kwizinto ezihlanganisiweyo, umzobo onzulu, ukwenza umgubo kunye nokubumba amasimi.
IiComposites Ukubumba iHydraulic Press
Olu shicilelo lusetyenziselwa iinkqubo zokubumba ze-SMC, i-DMC, i-GMT, kunye neemveliso ze-LFT-D, ezisetyenziselwa i-automotive lightweight, isakhiwo kunye nokwakhiwa, i-aerospace, i-traffic traffic, i-low-voltage electric industry.
Isitampu seMetal / uMzobo oNzulu weHydraulic Press
Umzobo onzulu weHydraulic Press usetyenziswa kumzobo onzulu, ukugximfizwa, ukubethelwa kwamaphepha esinyithi emoto, ikhitshi kunye nemizi mveliso yasekhaya.
Ukubumba isinyithi somgubo seHydraulic Press
Ikakhulu isetyenziselwa ukucinezela isinyithi somgubo, iiseramikhi ze-elektroniki, umgubo womhlaba onqabileyo, i-silicon carbide, imathiriyeli yemagnethi ye-ferrite kunye negraphite kunye nezinye iimveliso, kwaye ingasetyenziswa ngokubanzi kwiimoto, i-aerospace, iinqanawa, isantya esiphezulu sikaloliwe, izixhobo zoomatshini, izixhobo zasekhaya, amandla. izixhobo zokuvelisa kunye namanye amashishini.
Isicelo seComposite Hydraulic Press
Ngemfuno eqhubekayo yemarike kunye nophuhliso olukhawulezayo lweshishini lemoto ye-aerospace, ukuze ulungelelanise ukhuphiswano lwemarike, iiplastiki zeglasi eziqinisiweyo zefiber, iiplastiki ezinamandla aphezulu kunye nezinye iimveliso ziye zavela ngokubanzi;ngenxa yeenzuzo zexabiso eliphakathi, imfutshane m...
Zenziwa njani izigqubuthelo zomngxuma ezidityanisiweyo eziphezulu?
Isigqubuthelo somngxuma ohlanganisiweyo luhlobo lwesigqubuthelo somngxuma wokuhlola, kwaye iimpawu zalo zichazwa: isigqubuthelo somngxuma wokuhlola sidityaniswe yinkqubo ethile esebenzisa i-polymer njengesixhobo se-matrix, ukongeza izinto zokuqinisa, izigcwalisi, njl. (kwakhona c...
Izilumkiso zofakelo lwe-Hydraulic press
"WIN-WIN" yinjongo yethu
Ndiyathemba kwaye siyakholelwa Sinokuba liqabane lakho elizinzileyo elilungileyo